Rome နာရီ Rome နာရီ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - Fashion Rome-Black
အဆိုပါအနက်ရောင်အဆုံးမဲ့မူးယစ်ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အချိန်ဘဏ္asureာကို box ကိုတခုခုပေါ်ထွက်လာ
အဆိုပါပွတ်အနက်ရောင်ဒီဇိုင်းကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ထားထုတ်တတ်၏,၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် texture နှင့်ကြော့ရှင်းသည်.
တွဲဖက်ငွေ-လက်ဖြူတို့သည်မှောင်မိုက်သောညတွင်လရောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏,နှင့်အချိန်ဘဏ္treာကို box ကို၏ခရီးစတင်ခဲ့သည်,တိတ်ဆိတ်နှင့်မူးယစ်.
အဆိုပါ Matte texture မျက်နှာပြင် 12 နှင့်ကိုက်ညီနေသည်.6.9 ခွက်စကေး.ခြုံငုံအရောင်အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်.အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးလေထုနှင့်အနိမ့်သည်-သော့နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း.သင်၏စိတ်ထားနှင့်ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ
ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ
စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/rome-watches.html
Xing Heart Enterprise Partnership ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Rome နာရီ in Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကြောင့်၎င်း၏ထက်သာလွန်အရည်အသွေးနှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ကြီးသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ ဖရိုဖရဲလူ့အဖွဲ့အစည်း၌တည်၏,အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းနှင့်ကြင်နာမှုပြခြင်း.မှိန်ကမ္ဘာ၌,၎င်းသည်ထူးခြားသောအလင်းကိုထုတ်လွှတ်သည်.နာရီအဖြူ,အရာရိုးရှင်းခြင်းနှင့်ကြော့ရှင်းသင်္ကေတ,ဇိမ်ခံကားများနှင့်တောက်ပနေသောအရောင်များကိုဖော်ပြသည့်အရောင်လက်ပတ်နာရီနှင့်တွဲဖက်ထားသည်.အညိုရောင်အစစ်အမှန်အဖြူရောင်လက်ပတ်နာရီသည်အနိမ့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်-မိမိကိုယ်ကို၏သော့ချက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး.သပ်ရပ်လှပသောဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်မှုများစွာကိုပေးသည်.ဒါပေမယ့်လည်းမတောက်ပပါဘူး.သင်တစ်နေ့တာတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ပုံမှန်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခွင်ရှိကုမ္ပဏီမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖြစ်စေတွေ့ဆုံခြင်းရှိမရှိ,သင်ကိုယ်တိုင်အချက်များကိုထိထိရောက်ရောက်ထည့်နိုင်သည်. အဆိုပါပွတ်ကြွေဆေးသုတ်နှင့်ငွေ-အဖြူရောင်ဂန္ထဝင်လိုင်းအကြေးခွံများသည်ကြော့ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသည့်ဖက်ရှင်ကျသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်,ပေါင်းစိတ်ကြိုက် pointer နှင့်နောက်ကျောအဖုံးထွင်းထု,စိတ်နှလုံး၏အသုံးအနှုန်းမြင့်မားနိုင်အောင်-ပရိုဖိုင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာ,နှင့်တင်းကျပ်စွာဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်.လက်၏နောက်ကျော၌,ရေတွင်းတစ်တွင်းရှိ၏-လိုက်ဖက်လင်းကျောက်နာရီ. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အဖြူ/အနက်ရောင် ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
အကောင်းဆုံး Rome နာရီ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Rome နာရီ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Rome နာရီ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ အမည်မသိသင်္ကေတ,ဒါပေမယ့်လည်းပါဝါကိုသင်္ကေတ.ဒါဟာကြော့ရှင်းခြင်းနှင့်နက်နဲသောအရာကိုသင်္ကေတ.အနိမ့်-သော့နှင့်တည်ငြိမ်သောအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်သည်မျက်နှာပြင်ကိုကန့်သတ်မှုမရှိတော့သောလမ်းကြောင်းကိုစံပြုစေသည်.သက်ရှိမှဆင်းသက်လာဒီဇိုင်းလှုံ့ဆော်မှု,အလွန်မြင့်မားသော collocation.တစ်ခါတစ်ရံလူရွှင်တော်တစ် ဦး ဖြစ်ပါစေ,နှင့်အချိန်များတွင် chic ငယ်ရွယ်မာစတာဖြစ်လာသည်.နာရီများသည်ဖက်ရှင်ကျသောအဝတ်အစားများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်,သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအပြည့်အဝတင်ပြနိုင်အောင်.စင်ကြယ်သောနာရီမျက်နှာ၏ဒီဇိုင်းကိုသံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်,ပြီးတော့အနိမ့်၏သင်္ကေတဖြစ်လာဖို့အဖြူရောင်ကြိုးနှင့်အတူချိတ်ဆက်-အဓိကဇိမ်ခံပစ္စည်း,သင့်ဘဝကိုရိုးရှင်းပြီးအရသာအသစ်တစ်ခုယူဆောင်လာသည် အဆိုပါပွတ်ကြွေဆေးသုတ်နှင့်ငွေ-အဖြူရောင်ဂန္ထဝင်လိုင်းအကြေးခွံများသည်ကြော့ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသည့်ဖက်ရှင်ကျသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်,ပေါင်းစိတ်ကြိုက် pointer နှင့်နောက်ကျောအဖုံးထွင်းထု,စိတ်နှလုံး၏အသုံးအနှုန်းမြင့်မားနိုင်အောင်-ပရိုဖိုင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာ,နှင့်တင်းကျပ်စွာဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်.လက်၏နောက်ကျော၌,ရေတွင်းတစ်တွင်းရှိ၏-လိုက်ဖက်လင်းကျောက်နာရီ. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အဖြူ/အနက်ရောင် ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ အဖြူသည်နေ့အချိန်၌နေရောင်ခြည်ဖြစ်သည်,မင်းနဲ့ငါ့ကိုထွန်းလင်းအဖြူရောင်,ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပူသောနေကဲ့သို့၎င်း၊,လူတွေကိုအမြဲတမ်းနွေးထွေးမှုပေးတယ်,ငါနှင့်မှောင်မိုက်၌သင်နှင့်ငါ့ကိုပေါ်ထွန်းလင်း.တောက်ပသောအဖြူရောင်ဒီဇိုင်းသည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှင့်အားကောင်းသောအလင်းကိုထုတ်လွှတ်သည်.တောက်ပတယ်,တည်ငြိမ်ပြီးတည်ငြိမ်.ဒါဟာခပ်သိမ်းသောကာလညင်သာစွာထွန်းလင်း,ဒါပေမယ့်လည်းမသိသောတစ်သဲလွန်စရှိပါတယ်,လူတွေကိုစပ်စုခံစားရစေသည်. ထိုကဲ့သို့သောနေ့ရက်ကာလ၌,သင်၏နှလုံးထဲရှိစကားလုံးများနှင့်သင်ကြာမြင့်စွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့သောဓာတ်ပုံများသည်နာရီ၏နောက်ကျောတွင်အက္ခရာတင်ထားသည်,သွေးခုန်နှုန်းအနီးဆုံးနေရာ,သင်နှင့်ငါနှင့်တိုင်းသွေးခုန်နှုန်းနှင့်အတူလိုက်ပါရန်.အရှိန်၏အရေးကြီးသောအခိုက်မှာ,သင်နှင့်ငါသည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌နက်ရှိုင်းစွာထိုးနှက်ခံရလိမ့်မည်. အဆိုပါ Matte texture မျက်နှာပြင် 12 ကိုက်ညီ.6.9 ထစ်အချိုး.ခြုံငုံအရောင်အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်.စတိုင်လ်ကအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးလေထုဖြစ်ပါတယ်,အနိမ့်-သော့နှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း.ဤသည်သင်၏စိတ်ထားနှင့် connotation မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အဖြူ/အနက်ရောင် ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ Noble သန့်ရှင်းစင်ကြယ်,ကြယ်များကဲ့သို့တောက်ပ၏,နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့တောက်ပသော.အမျိုးအစား၏မျက်နှာပြင်သည်အတွင်းနှင့်အပြင်မှထွန်းလင်းတောက်ပသည်.ဒီအချိန်မှာ,သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအတောက်ပဆုံးဖြစ်တည်မှုဖြစ်ကြသည်.သံမဏိကိုယ်ထည်သည်အချိန်နှင့်အမျှတောက်ပမှုအသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်ဂန္ထဝင်ကွက်ကြိုးနှင့်တွဲထားသည်.မင်းဟာနေရောင်ထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နိုင်တယ်,သို့မဟုတ်သင်ရင့်ကျက်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်.သင်သည်လိမ္မာပါးနပ်သောအမျိုးသမီး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္playတွင်ပါဝင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လှပသောမင်းသမီးလေးကိုအတုယူနိုင်သည်.သင်လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းသင့်စတိုင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ချင်သလောက်အရသာပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.အလင်းနှင့်ထောင့်၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ,ရိုးရိုးလေးပါ,၎င်းသည်အလင်းဖြင့်နေဆဲဖြစ်သည်.သန့်ရှင်းသောငွေ,ဝတ်စားဆင်ယင်သူသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ကိုအစဉ်အမြဲရှာဖွေတွေ့ရှိပါစေ-ပြောင်းလဲနေတဲ့. နေပုံစံပုံစံသည်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုတွင်မြင့်မားသောအတိုင်းအတာရှိသည်,ဒီဇိုင်းအကြောင်းအရာများကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ပြနိုင်သည်.အနည်းငယ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်.သင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖော်ပြချင်တဲ့မင်းအတွက်,၎င်းသည်အရည်အသွေးအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:ငွေ/အဖြူ/အနက်ရောင်/အပြာရင့်/မြအစိမ်း(ကန့်သတ်) ▲pointer:၃၆ မီလီမီတာ-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်/41mm-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်(ရက်စွဲပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ) လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ နံနက်အရုဏ်တက်ချိန်သည်ည၏အထီးကျန်ဆန်မှုကိုဖယ်ရှားပြီးအသက်တာထဲသို့ထိုးသွင်းသည်.အလယ်ဗဟိုမှအပြင်သို့တိုးချဲ့တောက်ပသော texture,နေရောင်ခြည်လို,ဝတ်ဆင်၏လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုအခန်းကရေးသားခဲ့သည်.ယွန်းထည်များသည်သံမဏိကိုယ်ထည်သည်ညအချိန်တွင်သစ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်.Matte mesh ကြိုးသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်သည်.အလင်း၏ irradiation အောက်မှာ,သူကကြော့လူကြီးတစ် ဦး အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်,နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်မသိသောလမ်းညွှန်များကိုသွားခဲ့သည်.လှပသည်ဖြစ်စေလမ်းတစ်လျှောက်ဖောက်သည်ဖြစ်စေ,သင့်လက်ပတ်နာရီကိုအလိုအလျောက်ကောက်ယူနိုင်သည်.အလင်းနှင့်ထောင့်၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ,နက်နဲရာထဲမှာ,၎င်းသည်အလင်းဖြင့်နေဆဲဖြစ်သည်.အေးဆေးတည်ငြိမ်သောရာသီဥတုကြောင့် ၀ တ်ဆင်သူသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ကိုနိမ့်ကျစွာကြည့်ရှုစေလိမ့်မည်-သော့ချက်လမ်း. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:ငွေ/အဖြူ/အနက်ရောင်/အပြာရင့်/မြအစိမ်း(ကန့်သတ်) ▲pointer:၃၆ မီလီမီတာ-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်/41mm-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်(ရက်စွဲပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ) လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ အဆိုပါစှဲ subvert,အပြာနေရောင်ခြည်လိုပဲ.ဒါဟာဒြပ်နေရောင်ဖြစ်ပါတယ်,ဖက်ရှင်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း.မည်သူမျှနေ၏အရောင်ကိုကန့်သတ်မထားနိုင်ပါ,နောက်ပြီးမင်းရဲ့အသွင်အပြင်ကိုဘယ်သူမှတားဆီးမှာမဟုတ်ဘူး.အလင်းသည်မျက်နှာပြင်၏အလယ်မှအပြင်သို့ပျံ့နှံ့သွားသည်,အချိန်သို့စွမ်းအင်ထိုး,86400 စက္ကန့်ထွန်းလင်းအောင်.သံမဏိအိတ်နှင့်သိုင်းကြိုး၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကသင့်အားအမြဲတမ်းအပြစ်မဲ့ပြီးစိတ်ရိုးဖြောင့်ရန်သင့်အားသတိပေးသည်.အထင်ရှားဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပြပါ-ဖရိုဖရဲဘဝကိုယုံကြည်မှုနှင့်အရှားပါးဆုံးအလှအပကိုအနက်ကိုဘော်ပြ.ဆန့်ကျင်သူတစ် ဦး ပါ-အရိုးနေနှင့်အရိုးဟောင်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်အသစ်ကိုရေးပါ.အလင်းနှင့်ထောင့်၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ,အဆိုပါပညာတတ်၌တည်၏,၎င်းသည်အလင်းဖြင့်နေဆဲဖြစ်သည်.မိမိကိုယ်ကို၏နီလာ-ယုံကြည်မှု,ဝတ်ဆင်သောသူ၊,အရုဏ်မှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ကြိုဆိုပါတယ်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:ငွေ/အဖြူ/အနက်ရောင်/အပြာရင့်/မြအစိမ်း(ကန့်သတ်) ▲pointer:၃၆ မီလီမီတာ-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်/41mm-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်(ရက်စွဲပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ) လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်｜Custom Watch Dials
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို-ယုံကြည်မှုကပင်လယ်ရေလိုပါပဲ.ထပ်ခါတလဲလဲမြင့်မားတဲ့ဒီရေနှင့်ဒီရေနည်းနှင့်အတူ,ကကွဲပြားခြားနားသောပင်လယ်ဒေသများရှိပင်လယ်ကနေခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်.ပင်လယ်ရေဟာဖက်ရှင်နဲ့တူတယ်.သင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးမရေမတွက်နိုင်သောဘွတ်ဖိနပ်များပေါ်တက်လာလျှင်ပင်,သူနှင့်သင့်ကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်.အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ရေသည်ဖက်ရှင်နယ်နိမိတ်များကိုစံသတ်မှတ်ရန်သံမဏိအိတ်ထဲတွင်ထည့်သည်.နှင်းဆီ၏လိုင်းသည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိပါ,နှင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အခြားလှိုင်းဆွဲ.နေ၏အာရုံနှင့်တောက်ပမှုကိုဆွဲဆောင်ရန်သိမ်မွေ့သောအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ.ရေမျက်နှာပြင်အောင်နေစဉ်,ဒါကြောင့်လည်းမိမိကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တည်မှုကိုမှန်ကန်စေသည်.ဂန္ထဝင် Galaxy ကမင်းကိုမင်းရဲ့ကျက်သရေကိုလွှတ်ပေးပြီးမင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုတိုးစေတယ်.သင်ဖက်ရှင်နှင့်ကြော့ရှင်း၏ဒီရေဖြစ်လာနိုင်ပါစေ.လှပသောမျက်နှာပြင်နှင့်စိတ်ကြိုက် pointer သည်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်,နောက်ကျောဖုံးသည်နာရီတစ်ခုလုံးကို ပို၍ နွေးပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အပြာ-အစိမ်း/ပန်းရောင်အဖြူ ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ အဆိုပါပွင့်ချပ် pearly ဖြူဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ်ဖြန်းကြသည်,နှင့်အရောင်လိုင်းများ blossoming ချယ်ရီပွင့်သို့သူတို့ကိုငါဖျောပွ.ချယ်ရီပန်းပွင့်မှပန်းနုရောင်မှအဖြူရောင်သို့အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ထားနှင့်ကြော့ရှင်းမှုကိုလုံးလုံးလျားလျားဖော်ပြသည်.Venetian Venetian အနီရောင်စစ်မှန်သောသိုင်းကြိုးနှင့်နှင်းဆီ၏သံမဏိအမှုနှင့်အတူ,နိမ့်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်-တိုင်းအခါသမယအတွက်သော့နှင့်ထူးခြားသော.ဟုတ်လား&တောင်ကြီးမြို့;sa အစ်မပါတီသို့မဟုတ်စုံတွဲတစ်တွဲ&တောင်ကြီးမြို့;မင်္ဂလာပါ,က&တောင်ကြီးမြို့;သင်တို့ကိုမျက်စိပိုမိုစေရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ-ဖမ်းမိ.ရိုးရှင်းသော collocation သည်ဘုန်းအသရေနှင့်စည်းစိမ်ချမ်းသာမလိုအပ်ပါ,နှင့်လှပသောချယ်ရီပန်းပွင့်နေရာတိုင်းအလှတရားများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ.Classic Galaxy သည်သာမန် collocation ဖြင့်ထူးခြားသောအရသာကိုဖန်တီးနိုင်သည်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:အပြာ-အစိမ်း/ပန်းရောင်အဖြူ ▲pointer:တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ irregularular လိုင်းငွေ dial အပေါ်လွတ်လပ်စွာလွှဲ,ဒီဇိုင်နာ၏လွတ်လပ်မှုကိုသင်္ကေတ.မူလရိုးရှင်းသောအဖြူရောင်သမ္မာသတိရှိပါစေ,တောက်ပပြီးသွက်လက်.နှင်းဆီသို့မဟုတ်ငွေရွေးစရာများရှိသည်,ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုစားပွဲပေါ်မှာထူးခြားတဲ့စတိုင်ရှိပါတယ်.အတူ”ငွေနှင့်အဖြူ”အဓိကအရောင်အဖြစ်နှင့်အနက်ရောင်ထောက်ပြနှင့်အတူအလှဆင်,အလွန်အမင်းအခါသမယများတွင်မိမိတို့၏စိတ်ထားကိုပြသရန်လိုအပ်သူများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်.နှင်းဆီနှင့်အတူ-ပုံဖော် Case နှင့်အဖြူရောင်ကြွေသိုင်းကြိုး,အပန်းဖြေမှုမှာလှပမှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်.တောက်ပငွေအမှုနှင့်ငွေ-အဖြူရောင်သံမဏိကြိုး,သငျသညျကိုအလွယ်တကူအာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းကသင့်ကိုစတိုင်ကျတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပေးစွမ်းသည်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:ငွေ/အပြာရင့် ▲pointer:၃၆ မီလီမီတာ-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်/41mm-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်(ရက်စွဲပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ) လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်
စတိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကြည့်ပါ ဖက်ရှင်ကလွယ်ကူပါတယ်,စျေးကြီးနေ့စဉ်နိုင်ပါတယ်.အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အပြာနှင့်ဖုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖုံးအုပ်ထားပါ,ပြီးတော့ကျပန်းမမှန်လိုင်းများနှင့်အတူကအလှဆင်.၎င်းသည်နှင်းဆီသို့မဟုတ်တောက်ပသောငွေဖြစ်ပါစေ,သငျသညျအနိမ့်အနည်းငယ်ကြော့ရှင်းထည့်နိုင်ပါတယ်-သော့.အခြားလူတိုင်းလိုဖြစ်ချင်စိတ်,နာရီသည်အရသာ၏ထူးခြားသောသက်သေဖြစ်လာသည်.ကျစ်လစ်ပြီးစတိုင်ကျတဲ့ဒီဇိုင်းက Gaoya ကိုအဓိပ္ပာယ်အသစ်ပေးတယ်,သငျသညျရိုးရှင်းခံစားရရန်ခွင့်ပြု,ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းလိုလို.သင်ရွေးချယ်နိုင်သောသံမဏိအိတ်နှင့်အဖြူရောင်သိုင်းကြိုးနှင့်အတူ,၎င်းသည်သင့်ကိုသာမန်နှင့်လက်ရာမြောက်သောစွယ်စုံဖက်ရှင်ကိုပြလိမ့်မည်.သင်တစ် ဦး genteel စတိုင်ပြသချင်ပါသလား,သို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်သီလကိုပြ,နက်ရှိုင်းသောသန်းခေါင်ယံအပြာ,ဒါကြောင့်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး wear မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်. ▲နာရီအရွယ်:၃၆ မီလီမီတာ/41mm ▲မျက်နှာပြင်အရောင်:ငွေ/အပြာရင့် ▲pointer:၃၆ မီလီမီတာ-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်/41mm-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်(ရက်စွဲပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ) လှုပ်ရှားမှု:လင်းကျောက်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း:သံမဏိ 316 ဖန်ခွက်:နီလာမှန် သိုင်းကြိုး:သံမဏိ/သားရေ မျက်နှာပြင်အချင်း:၃၆ မီလီမီတာ/41mm မျက်နှာပြင်အထူ:၇.၁ မီလီမီတာ/7.၂ မီလီမီတာ ကြိုးအရွယ်အစား:၁၆ မီလီမီတာ/၂၀ မီလီမီတာ ရေစိမ်ခံသော:ရေစိုခံ 3ATM အမှတ်တံဆိပ်မူလအစ:ထိုင်ဝမ် မျက်နှာပန်းကန်၏အရောင်,နာရီ၏အိတ်နှင့်သိုင်းကြိုးကိုလွတ်လပ်စွာကိုက်ညီစေနိုင်သည်.စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပါ:စိတ်ကြိုက်နာရီလက်｜နောက်ကျောအဖုံးလေဆာရောင်ခြည်